Munaasabadda faafitaanka sare ee Hindiya waxay soo jiidatay 3,000,000 oo qof in kasta oo COVID-19 cusub oo qalliin ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Hindiya » Munaasabadda faafitaanka sare ee Hindiya waxay soo jiidatay 3,000,000 oo qof in kasta oo COVID-19 cusub oo qalliin ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Caafimaadka Warka • Wararka Hindiya • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Superspreader: Munaasabada diiniga ah ee Hindiya waxay soo jiidataa 3,000,000 oo qof iyada oo ay jirto qalliin cusub oo COVID ah
In kasta oo isu imaatinka dadweynaha laga mamnuucay qaybo ka mid ah dalka, halkaas oo infekshannada leh nooca Omicron ee aadka loo kala qaadi karo ay ku soo badanayeen, dawladda hoose ee Galbeedka Bengal ayaa oggolaatay xafladda sanadkan.
Marka loo eego qiyaasaha rasmiga ah, ilaa saddex milyan oo xujey ah ayaa laga yaabaa inay isugu yimaadaan jasiiradda Sagar ee waqooyiga Hindiya xafladda qubayska diimeed ee biyaha wabiga Ganges.
Dad aad u tiro badan oo Hinduus ah ayaa ku soo qulqulaya marinka Ganges delta, iyaga oo ka quustay in ay dhex galaan biyaheeda. Dad badan oo ka kala yimid gobollo badan ayaa soo booqda munaasabadda, taas oo socota maalmo badan. Iyagoo jabinaya xeerarka faafa, waxay ku safraan basaska cidhiidhiga ah, doomaha, iyo tareenada ilaa jasiiradda ka dibna waxay ku noqdaan waddankoodii.
Waxaa horay u jiray "bad dad ah" iyadoo ay cibaadaysanayaashu isugu soo urureen si ay u xusaan ciida Makar Sankranti (ama Magh Mela), oo ah sarkaal maxalli ah HindiyaGobolka Galbeedka Bengal ayaa yidhi, isaga oo intaa ku daray in xujaajta badankoodu aanay xidhnayn waji-xidho.
Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa goobta la geynayaa si ay biyaha ugu buufiyaan xujeyda, isla markaana ay u yareeyaan ciriiriga webiga, balse tani kama joojineyso inay si dhab ah ugu quustaan ​​biyaha Ganges-ka.
"Waxay rumaysan yihiin in Ilaah uu badbaadin doono iyaga oo ku qubanaya meesha ay ku kulmaan waxay nadiifin doonaan dembiyadooda oo dhan, iyo xitaa fayraska haddii ay qaadaan," ayuu yiri sarkaal ka tirsan booliiska maxalliga ah.
Sida laga soo xigtay qabanqaabiyeyaasha, kaliya kuwa haysta shahaadooyinka tallaalka iyo natiijooyinka baaritaanka PCR-da ee xun ayaa loo oggol yahay inay ka soo qaybgalaan, baarista kuleylka ayaa la sameeyay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira walaac laga qabo in aan la dhaqangelin karin baaritaanno ammaan oo sax ah, sababtoo ah taasi waxay horseedi kartaa xaalado u eg isjiid jiid. "
In kasta oo qabanqaabadu socoto, dad badan oo cibaadaysanaya ayaa qubaysta qubayska oo ku xad gudbaya xadka 50 qof markiiba, laakiin ma awoodno inaan ka hortagno iyaga,” ayuu sarkaal sare u sheegay warbaahinta maxalliga ah.
Ku dhawaad ​​80 askari oo booliis ah iyo shaqaalaha nadaafadda ee loo diray xafladda ayaa laga helay cudurka 'coronavirus', sida la sheegay maanta.
"Tani waxay noqon doontaa fidin weyn," qareen ka codsaday maxkamad in la joojiyo xafladda, Utkarsh Mishra, ayaa yidhi.
Iyadoo meelaha qaar laga mamnuucay isu imaatinka dadweynaha Hindiya, halkaasoo infekshannada aadka loo kala qaado omicron Kala duwanaansho ayaa kor u kacday, dawlada hoose ee Galbeedka Bengal ayaa ogolaatay xaflada sanadkan.
The Maxkamadda Sare ee Calcutta ayaa maamulka ka codsaday in ay ku adkaystaan ​​in kuwa cibaadaysanaya ay doortaan waxa loogu yeero 'e-bathing' markan, warbaahinta Hindiya ayaa werisay. Qaarkood waxay dalbadeen in ay ku helaan xirmooyinka-qubeyska e-e-boostada, laakiin badidoodu waxay rabeen inay shakhsi ahaan uga qaybgalaan.
Isu imaatinka Hinduuga la midka ah sanadkii hore ayaa la rumeysan yahay inuu soo diray caabuqyo kala duwanaanshaha Delta ee burburay ee dalka oo dhan. Khamiista, ku dhawaad ​​​​265,000 xaaladood oo cusub oo ah coronavirus ayaa la duubay, iyadoo qiyaasaha qaar ay soo jeedinayaan in tiradu ay kor u dhaafi karto 800,000 dhowr toddobaad gudahood.